लकडाउन अवधिभर सेयर बजार पनि बन्द Bizshala -
गोर्खाज फाइनान्स डूब्ने अवस्थामा, संचालकको हस्तक्षेपपछि सीइओको राजीनामा
इन्फिनिटी लघुवित्त छैटौँ वर्षमा प्रवेश
स्पुतनिकको दुई डोज ओमिक्रोनका लागि ‘महाकाल’, फाइजरभन्दा दुईगुणाले बढाउँछ एन्टीबडी
ओमिक्रोन सङ्क्रमणपछि कति दिन आइसोलेसन बस्ने ? कति दिनपछि अरुलाई सर्दैन ?
लकडाउन अवधिभर सेयर बजार पनि बन्द
काठमाण्डौ । लकडाउन अवधिभर धितोपत्र बजार पनि बन्द हुने भएको छ ।
सरकारले आइतबार लकडाउनको अवधि चैत २५ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले लकडाउनलाई पहिलाभन्दा थप कडा बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
यो निर्णयसँगै धितोपत्रको दोश्रो बजार कारोबार के हुने भन्ने लगानीकर्तामा अन्यौल रहेको बेला नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेड(नेप्से)ले कम्तीमा पनि लकडाउन अवधिभर कारोबार नहुने प्रष्ट पारेको हो ।
नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले आइतबार धितोपत्र बोर्डले बजार बन्द वा सुचारु गर्ने विषयमा नेप्सेको राय मागेको र आफूहरु बजार लकडाउन अवधिभर खुल्नुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट्याए । ‘लकडाउन अवधिभर बजार खोल्ने निर्णय व्यवहारिक हुँदैन ।’ साउदले भने–‘लकडाउन अवधिभर दोश्रो बजार कारोबार पनि बन्द गर्ने औपचारिक निर्णय आज(सोमबार)को नेप्से बोर्डले गर्दैछ । लकडाउन अवधिभर बजार बन्द हुन्छ ।’
यसअघि अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई सेयर कारोबार खुलाउने आशयको पत्र पठाएको थियो । सो पत्रपछि मंगलबारदेखि सेयर कारोबार खुल्ने भन्दै लगानीकर्ता, ब्रोकर तथा अन्य सरोकारवालाहरुबाट तीव्र विरोध भएको थियो ।
सबैबाट विरोध आएपछि धितोपत्र बोर्डले नेप्सेको राय माग्दै समयअनुकुल निर्णय लिन सुझाएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ५ दिन कारोबार बन्दको यसअघि निर्णय गरेको थियो । ५ कार्यदिन कारोबर बन्द गर्ने भनिएको र त्यो अवधिको अन्तिम दिन आज हो ।
यसैबीच, सरकारले आइतबार घोषणा गरेको राहात प्याकेजमा धितोपत्र बजारका लागि समेत दुईवटा व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार कारोबार राफसाफ गर्न बाँकी रहेकाहरुले चैत्र मसान्तसम्म गर्नसक्ने छुट दिइएको छ । यस्तै, धितोपत्र ऐन बमोजिम सूचिकृत कम्पनीहरुले बुझाउनु पर्ने विवरण पनि चैत मसान्तसम्म बुझाए हुने सुविधा दिइएको छ । सो अवधिसम्म विवरण बुझाउँदा ती कम्पनीहरुले जरीवाना तिर्नुपर्ने छैन ।
nepal stock exchange Security Board Of Nepal covid-19
एकवर्षभित्रै तीनै तहको चुनाव गर्ने घोषणा, तयारी थाल्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
किन निरन्तर ओरालो लाग्दैछ विश्व सेयर बजार ?
थप १०७०३ मा कोरोना पुष्टि, ७६६ संक्रमणमुक्त, ३ को मृत्यु
पुस मसान्तसम्म २४ हजारभन्दा बढीले पाए रु. १.०६ खर्ब पुनरकर्जा
महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नबिल बैंक, वुमन लिडरसिप फोरम र महिला शक्ति विकास केन्द्रले सहकार्य गर्ने
जोरबिजोर प्रणाली यी सवारीसाधन सञ्चालनमा लागू नहुने
आईजीआईको सेयरभाउ बढेमा रु. १५०० सम्म पुग्नसक्ने, कति–कतिमा छ
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड...
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको १५०% हकप्रदमा आवेदन खुला
काठमाण्डौ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आज माघ ७ गतेबाट...
यो साता के–के भए सेयर बजारमा ? आगामी साता के होला ?
काठमाण्डौ । यो साताको पाँच कारोबार दिनमा सेयर बजार ३ दिन बढ्यो भने २...
संवेदनशील सूचना लिक गर्ने सेबोनका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । लामो समयपछि नेपाल धितोपत्र...
दोहोरो अंकले बढ्यो नेप्से, विकास बैंक र फाइनान्समा चमक
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहीबार सेयर...
सेबोनले दियो एकैपटक ५ कम्पनीलाई आईपीओ र २ कम्पनीलाई हकप्रद
काठमाण्डौ । झन्डै ५ महिनापछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ५...
नेप्सेमा थपियो ४ कम्पनीका १ करोड ३४ लाख बढी कित्ता सेयर
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा आज ४ कम्पनीका १ करोड ३४...
सेबोनकै सक्रियतामा संवेदनशील सूचना लिक, निर्णय घण्टौ लुकाएर
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही मिडियाहरुलाई प्रयोग गरेर...